Dowladda Itoobiya Oo U Digtay Sudaan
Wednesday January 13, 2021 - 12:19:22 in Wararka by Burco Office 2
"Dhinaca Sudan waxay u muuqdaan inay doonayaan inay xaaladda sii huriyaan,"ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, Dina Mufti oo saxaafadda kula hadlay Addisababa.
Dhanka kale wasiirka warfaafinta ee Sudan, Feisal Maxamed Saleh ayaa sheegay in dalkiisa uusan dooneyn dagaal ay la galaan Itoobiya, balse ciidamadooda ay ka jawaabi doonaan waxwalba oo uga yimaadda dhanka Itoobiya.
"Waxaanu ka cabsi qabnaa in hadalada kasoo yeeraya Itoobiya ay yihiin kuwa xanaf leh oo damqaya Sudan, waxaan Itoobiya weydiisaneyna inay joojiyaan weerarka ka dhanka ah madaxbanaanida dhuleed ee Sudan iyo beeraleyda Sudan," ayuu wasiirka warfaafinta ee Sudan u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters.
Sudan ayaa dhammaadka sanadkii tegay sheegtay inay la wareegtay dhul ay leedahay halka Itoobiyana ay Sudan ku eedeysay inay ka faaideysteen ciidamada Itoobiya ee ku mashquulsan dagaalka Tigray, ayna qabsadeen dhul ay Itoobiya leedahay.
Qaramada midoobay warbixin ay dhawaan soo saartay mar ay ka hadleysay xaaladda bani'aadanimo ee Tigray ayaa waxay sheegtay inay jiraan warar sheegaya in labada dal ay ciidamo soo dhoobeen xadka. Xiisadda xadka ayaa timid xilli dalalka Sudan, Itoobiya iyo Masar ay isku dayayaan in xal laga gaaro ismarin waaga ka taagan biyo xireenka wabiga Nile.